Lacagta dulsaarka bankiga dhexe. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Stefan Ingves, madaxa bankiga dhexe ee Iswiidhan oo ka hadlaya shir jaraa'id
Lacagta dul saarka
Lacagta dulsaarka bankiga dhexe.
La daabacay fredag 11 november 2011 kl 12.22
Madaxa baanka dhexe ee iswiidhan Stefan Ingves ayaa sheegay in lacagta dulsaarka ee bakiigaasi ee imminka ah boqolkiiba labo ay tahay mid hooseysa oo sax ah.
Stefan Ingves oo ka hor hadlay maalintii shalay baarlamanka ayaa sidaasi yiri mar wax laga weydiiyay lacagta dul saarka ee bankiyada Iswiidhan laakiin marka la eego xaalada hadda ka jirta dunida ee xagga dhaqaalaha ayaa horseedi karta in hoos loo dhigo mustaqbalka lacagaha dulsaarka balse aan ku jirin lacagaha dul saarka ee deymaha lagu iibsado gurayaha.
Shaxda dhaqaalaha ee bankiga dhexe ayaa tilmaameysa in heerka lacagta dul saarka ee bankiga dhexe ay sideedan ahaan karto ilaa iyo sanadka soo socda.
Stefan Ingves madaxa bankiga dhexe ee Iswiidhan ayaa aminsan in mishaakilka dhaqaalaha ee qaaradda Yurub uu yahay mid la xalin karo laakiin xaaladaaasi dhaqaale ayaa sii xumaaneysa waaxana dhici karta in bankiga dhexe uu hoos u dhigo lacagta dul saarka amaahda inkastoo madaxa bankiga dhexe Stefan Ingves uu sheegay in si taxadar ku dheehan tahay loo eego arrimaha socda.
Waan arki doonaa halka wadada ay ka baxdo waana hagaaji doonaa arrinka markii maalinteeda la gaaro waana wax aad u adag masiibada la xaliyo iyada oo aan imaan bal ka waran haddi aysan dhicinba, ayuu yiri Stefan Ingves madaxa bankiga dhexe ee Iswiidhan.
Aqoonyahano badan oo dhaqaalaha ayaa aminsan maanta in goor dhow bankiga dhexe uu hoos u dhigi doono heerka lacagta dul saarka ee Iswiidhan.
Bankiga dhexe ee qaarada Yurub ee ECB ayaa dhowaantan hoos u dhigay lacagahiisa dul saarka iyada oo uu gaarsiiyay 1,25 boqolkiiba.